မြောက်ဦးကိုပြန်ကြည့်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ကယ်တင်ရဦးမည့် ရှေးဟောင်းမွေအနှစ်ဇုန် နောက်ဆုံးရသတင်း
မြန်မာ့တင်ပို့ကုန်မှ ဘင်္ဂလာဝင်ငွေ ဇူလိုင်တွင် တာကာ ၄ ကုဋေကျော်သာရရှိဟုဆို - Sunday, September 02 2012 15:07	မျိုးဆက်သစ်နှင့် စာပေ - Tuesday, November 25 2014 10:18	ကုမ္ပဏီနိုင်ငံရေးနဲ့ တင်ဒါပါတီ - Wednesday, January 21 2015 04:44	ပါသင့်ပါထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်များမပါခဲ့ရင် ANP ပါတီ အနာဂတ်သည် ၂၀၂၀ နောက်ပိုင်းမှာ မရှိတော့ပါ - Sunday, March 01 2015 20:24	စာပေလေ့လာမှု အယူအဆများ (နိုင်ငံရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ သမိုင်းနှင့်စာပေ) - Sunday, March 01 2015 21:51	မြန်မာ	English	ပင်မသတင်းဒေသတွင်းပညာရေးစီးပွားရေးမှုခင်းကျန်းမာရေးအခွင့်အလမ်းဒေသတွင်းရွေးကောက်ပွဲဆောင်းပါးများဆောင်းပါးဖြုတ်ရန်သတင်းဆောင်းပါးအတွေးအမြင်အထူးအစီရင်ခံစာလူနေမှုဘ၀သုံးသပ်ချက်များမာတီမီဒီယာတီဗွီရေဒီယိုကာတွန်းဗေဒင်ဟာသစာအုပ်သုံးသပ်ချက်အယ်ဒီတာ့အာဘော်အင်တာဗျူးဗဟုသုတပေးစာများသရော်စာ
မဟာမြတ်မုနိဘုရားမှာ ရွှေကပ်ခြင်းသည် ဘုရားကို ဖျက်ဆီးနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း လူငယ်စာရေးဆရာ ဂျော်ဂျီပြောကြား	Editorial
ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်း ရေးတွင်သတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ကိုမထိန်း ချုပ်အပ်	Interview
ပါသင့်ပါထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်များမပါခဲ့ရင် ANP ပါတီ အနာဂတ်သည် ၂၀၂၀ နောက်ပိုင်းမှာ မရှိတော့ပါ	Article
မြို့မိမြို့ဘယဉ်ကျေးမှုနှင့် မိဘပြည်သူ နိုင်ငံရေးထဲတွင် ငိုက်မျဉ်းခြင်း	News Article
ပညာမတက်လို့ အုပ်ချုပ်ခံဘ၀ ရောက်နေရတယ် … ဆိုတဲ့ အမျိုးသားရေးနိုင်နိုင်	Review
ရခိုင်ဒေသတွင် တရုပ်ဆန့်ကျင်ရေး ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သလား	မဟာမြတ်မုနိဘုရားမှာ ရွှေကပ်ခြင်းသည် ဘုရားကို ဖျက်ဆီးနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း လူငယ်စာရေးဆရာ ဂျော်ဂျီပြောကြား
စစ်တွေမြို့နယ် ကျေးတောနှင့် ရွာမမှာ ပင်လယ်ရေကြီးဒဏ်ကြောင့် အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရဖွယ်ရှိ
မြောက်ဦးကိုပြန်ကြည့်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ကယ်တင်ရဦးမည့် ရှေးဟောင်းမွေအနှစ်ဇုန် Details
ပွင့်သစ် (တမန်းသား)	Article	January 20 2015	5347	နှစ်အတော်ကြာကွဲကွာနေခဲ့သော မြောက်ဦးနယ်မြေကို အဝေးမှလှမ်းမြင်ရသည်နှင့်ရင်ထဲတွင် ကြည်နူးစိတ်တို့ဖြစ်တည် ခံစားမိသည်။ အော် - ရခိုင်တို့၏ ရှေးဘုရင်မင်းများစိုးစံအုပ်ချုပ် မင်းပြုလုပ်နေထိုင်ခဲ့သော နယ်မြေပါတကားဟု စိတ်ထဲကတွေးရင်း တောင်စဉ်တောင်တန်းများပေါ်တွင် ထိုးထွက်နေသော စေတီပုထိုးတော်များကို ငေးမောတွေးတောရင်း အမြန်မရေယာဉ်မှာ မြောက်ဦးမြို့ဖောင်တော်သို့ ဆိပ်ကပ်လာသည်ကိုပင် ခရီးသည်များထိုင်ရာကနေ ထရပ်ကြမှ သတိဝင်လာပြီး အတွေးတို့ပြတ်တောက်ခဲ့ရသည်။
မြောက်ဦးနယ်မြေမှာ ခြေချလိုက်သည်နှင့် စိတ်က အလိုလိုလန်းဆန်းတက်ကြွလာမိသည်။
သို့သော်လည်း မြို့တွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာသည်နှင့် ယခင်ကလာရောက် လည်ပတ်ဖူးသော်လည်းယနေ့ မြင်ကွင်းများမှာ ယခင်နှင့်မတူသယောင် ခံစားမိပြန်သည်။ မရောက်ဖြစ်သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သဖြင့် ရောက်လိုစိတ်ပြင်းပြနေခဲ့သော မြောက်ဦးနယ်မြေသည် မိမိအတွက် သူစိမ်းဆန်သောအကြည့်များဖြင့်ပင် ကြည့်နေသလားဟု အတွေးတို့ဖြစ်ပေါ်ရပြန်သည်။
မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများစွာရှိသဖြင့် မြောက်ဦးသို့ ရောက်သည်နှင့် တွေ့ကြဆုံကြ၊ ပြောဆိုကြဖြင့် နွေးထွေးသော စေတနာတို့ကြောင့် ပျော်ရွှင်ခဲ့ရသည်။ မြောက်ဦး၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု အချို့ကိုလည်း မြင်တွေ့ရသည်။ လမ်းများအယင်နှင့်မတူဘဲ ကောင်းမွန်နေသည်။ တိုက်တာ အဆောက်အဦး များစွာကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ဟိုတယ်များလည်းတိုးလာခဲ့သည်။ တည်းခိုခန်းများလည်းတိုးလာသည်။ သို့သော်လည်း မြို့လည်မှဖြတ်၍ စီးဆင်းနေသော ချောင်းရေတို့သည် ညစ်ညမ်းမြဲညစ်ညမ်းနေဆဲ ဖြစ်သည်ကိုမူ စိတ်မကောင်းစွာ မြင်တွေ့ရပြန်သည်။
“ မရဘူးကွ၊ ဒီချောင်းက ဘယ်တော့မှ သန့်ရှင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ ချောင်းထဲကို နေအိမ်တွေက စွန့်ပစ်လို့ရတဲ့ အရာအားလုံး စွန့်ပစ်ကြတော့ ဘယ်လိုလုပ် သန့်ပါတော့မလဲကွာ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အများကြီးလုပ်ဖို့လိုသေးတယ် ” ဟု လည်း ဒေသခံ မိတ်ဆွေစာရေးဆရာ ကိုကွမ်းယာဆရာကြီးက ပြောပြသည်။
ဒီရေအတက်အကျရှိသော ချောင်းငယ်ဖြစ်သော်လည်း ညမ်ညမ်းနေသည်မှာ မြို့သူမြို့သားများအတွက်လည်း မကောင်းသလို လာရောက်သော ဧည့်သည်များအတွက်လည်း အားနာစရာကောင်းလှသည်။ နိုင်ငံတကာမှ လာရောက်လည်ပတ်သော မြို့ဖြစ်သဖြင့် အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေပြီဟုသုံးသပ်မိပြန်သည်။
နောက်နေ့များတွင် ရာသီဥတုသာယာလျှင်လည်း မြို့အနှံ့မှ တန်ခိုးကြီးဘုရားများကို သွားရောက်ဖူးမျှော်သည်။ သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်၊ မာန် ငါးပါး၊ ထုက္ကန်သိမ်၊ အံတော်သိမ်၊ တို့အပြင် လက်ဆည်ကန်၊ ဦးတော်ဆေးကန်၊ အနူမာကန်၊ တို့အပြင် စေတီပုထိုးများစွာတို့ကိုလည်း ဖူးမျှော်ခဲ့ရပါသည်။
ကိုးသောင်းပုထိုးတော်မှာ မြို့နှင့်အနည်းငယ်လှမ်းသဖြင့် သီးခြားသွားရောက်ဖူးမျှော်ခဲ့ရသည်။ နေ၀င်ချိန်ကို စောင့်ကြည့်ရင်း ဟာရီတောင် တောင်ပေါ်တွင်လည်း အချိန်ကုန်ခဲ့ကြသည်။ တောင်ပေါ်မှာ မြောက်ဦးမြို့ကို အပေါ်စီကြည့်ရသော အရသာမှာလည်း ဖော်မပြတတ်အောင် ပီတိဖြစ်ရသည်။ ကြည်နူးရသည်။ တော်ပေါ်မှ နန်းတော်ရာကုန်းကိုလည်း ကောင်းစွာမြင်ရသည်။ မိုးရာသီဖြစ်သဖြင့် မြင်ပင်ပေါင်းပင်များပင် နန်းရာရင်ပြင်ပေါ်တွင် စိမ်းစိုရှင်သန်ကြီးထွားနေ သည်ကိုမြင်ရသည်။
“ ဘားဘူဟိန့်ယင့်ဆန်ဟိန့်ယင့်၊ ဒိုင်းကျီဟိယင့်ရီဟိန့်ယင့် ” ဟူသော စကားများသည် ယခုခါတွင် လွဲမှားနေသည်ကို မြင်ရသဖြင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြန်သည်။ လက်ဆည်ကန်ရေသည်မှာ ယခုအခါတွင်သန့်ရှင်း မှုအားနည်းသွားပြီဟု လည်းဒေသခံများ ပြောစကားအရ သိရှိရသည်။
ထို့နောက် ဝေသာလီမြို့ရိုး၊ ကျူံး၊ ဓည၀တီမြို့ရိုးများ တည်ရှိရာသို့ သွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ရှေးခေတ် လက်ရာများစွာကို မြင်တွေ့ရသော်လည်း မိမိမှာ သုတေသီမဟုတ်သဖြင့် ကောင်းစွာမသိပေ။ အဖော်ပါလာသော မိတ်ဆွေများအား မေးမြန်းရသည်။ မိတ်ဆွေများမှလည်း မြောက်ဦးသား ပီပီလေ့လာလိုစိတ်နှင့် လေ့လာထားဟန်တူသည်။ သူတို့သိသလောက် တတ်သလောက်များကို ရှင်းပြကြသည်။
တစ်ချို့သော်လမ်းများတွင် ဗွတ်ထနေသဖြင့်ဖြစ်သလို ရှောင်ကွင်းသွားလာကြရသည်။ အဝေးပြေးကားဂိတ်ရှေ့တွင်လည်း ဗွတ်အိုင်များစွာ ဖြစ်ပေါ်နေသည်ကို သတိထားမိသည်။ ကောင်းအောင်မလုပ်သမျှ ကောင်းလာနိုင်မည်မဟုတ် သည်မှာသေချာသည်။
“ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာ ဗွတ်တွေကတော့ မိုးတွင်းဆိုဒီလိုပဲ။ နွေမှာဆိုလည်းဖုံထူတာပေါ့ဗျာ။ ဒီလမ်းတွေကို ကောင်းအောင်မှမပြင်ကြတာ။ ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းလာနိုင်ပါ့မလဲ။ နွေရာသီမှာတော့ မြောက်ဦးကတော့ ပူအိုက်တာကမ်း ကုန်တယ်ကုိုယ့်လူ” ဟု အသံပိန်ပိန်ဖြင့်ပြောတတ်သော ကိုကျော်စိန်သန်းက စိတ်ပျက်ဟန်ဖြင့် ပြောသေးသည်။
စင်စစ်အားဖြင့် မြောက်ဦးသည် သမိုင်းအမွေအနှစ်မြို့တော် တစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် ယာဉ်မှုနယ်မြေတစ်ခုလည်းဖြစ် သည်ကိုသတိထားမိသည်။ ရခိုင်သမိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ရှေးက ရခိုင်ဘုရင်များ ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းဖြင့် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်ကို သမိုင်းက သက်သေခံနေသည်။ ယင်းအတွက်လည်း နှစ်စဉ်ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများစွာရောက်ရှိလာတတ်သည်။ သမိုင်းအမွေအနှစ်မရှိလျင် နိုင်ငံခြားသားလည်း လာမည်မဟုတ်၊ ပြည်တွင်း ခရီးသွားများလည်း လာမည်မဟုတ်သည်မှာ သေချာသည်။ “ သမိုင်းဆိုတာ တန်ဖိုးထားမှ တန်ဖိုးရှိတာကွ။ တန်ဖိုးမထားရင် တန်ဖိုးကျဆင်းသွားမယ်။ ရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက် မြောက်ဦးနယ်မြေဟာ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဒေသတစ်ခုပါပဲ ” ဟု သမိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာလိုက်စားသူ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်နေပြီဖြစ်သော အဘိုးကြီးတစ်ဦးကပြောသည်။ မှတ်သားစရာ ကောင်းလှသော စကားပင်ဖြစ်ပါသည်။လွန်စွာ မှန်ကန်သော စကားဖြစ်သည်ဟု ခံစားမိသည်။
လက်ရှိအနေအထားတွင် သမိုင်းဆိုင်ရာ အမွေအနှစ်ဒေသဖြစ်သည့်အတွက် မီးရထားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ် သက်ပြီး ဒေသခံများအကြား စကားသံများကိုကြားလာရသည်။ ရှေးဟောင်းနယ်မြေမှ ရထားလမ်းဖောက်လုပ်မှုကို ကန့်ကွက်သူများရှိလာခဲ့သည်။ လွယ်ကူစွာဆုံးဖြတ်၍ မရနိုင်သော ကိစ္စရပ်များပင်ဖြစ်သည်။ လုပ်သင့်မလုပ်သင့် ကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်မှာ မှန်ကန်ရန်လိုအပ်သည်။ ပျက်သွားလျင် ပြန်ပြင်၍ မရနိုင်တော့သော အရများပင်ဖြစ်ပေသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လာခဲ့ပြီးမှ အမှားတစ်ချက်ဖြင့် မဖျက်စီးသင့်ပေ။ အလားတူစွာပင် မြောက်ဦးမြို့နယ်အတွင်း၊ သမိုင်းဝင်နယ်မြေအတွင်း ပျင်စရာများ၊ မပြင်သင့်စရာများကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ပြိုပျက်နေသောစေတီပုထိုးများ၊ ပြိုကျလုဆဲဆဲ စေတီပုထိုးများနှင့် ဆင်းတုတော်များကိုလည်း တွေ့ ရသည်။ ပြင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် မူလလက်ရာ ပျက်စီးသွားမည်ကိုလည်း စိုးရိမ်ရသည်ဟုပြောဆိုကြသည်။ မပြင်လျင် ပျက်စီးသွားကိုလည်းစိုးရိမ်သည်ဟု တစ်ချို့ကဆိုသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အမှန်အမှားသည် အဖြေတစ်ခုထွက်လာ မည်မှာ သေချာသည်။
“ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့က အာဏာရှိတယ်ဆိုပြီး လုပ်ချင်တာလည်း လုပ်ခဲ့ကြတာတွေရှိခဲ့ ဖူး တယ်။ ဘာမှ မလုပ်ပဲထားရင်လည်း တစ်ချို့ဟာတွေက တာရှည်မခံဘဲ ပျက်စီးကုန်မယ်။ တစ်ချို့ကတော့မပြင်တာ ကောင်းတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ ဒါကြောင့် အဖြေထုတ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်” ဟုလည်း ဒေသခံ ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန် တစ်ဦးက သူ့အမြင်ကိုပြောပြသေးသည်။
လက်ရှိမြောက်ဦးအခြေအနေသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများစွာကို ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်နေပြီဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ နန်းတော်ရာကုန်းပေါ်တွင်လည်း ကျူးကျော်များရောက်ရှိ နေရာယူနေသည်။ ရှေးရခိုင်ဘုရင်းများ လက်ထက်ကာလက ပြုလုပ်ထားခဲ့မှုများသည် ယခုခါတွင် မကောင်းသော ခိုးဆိုးဖျက်ဆီး လိုသူများကြောင့်လည်းကောင်း၊ သိမ်မွေ့စွာ ခိုးဝက်ရောင်းချလိုသူများကြောင့်လည်းကောင်း၊ ပြုပြင်မှုထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းနေခြင်များကြောင့်လည်းကောင်း များစွာပျက်စီးနေခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
တစ်ချို့သော စေတီပုထိုးများတွင် ဖောက်ထွင်းခံထားရမှုများကိုလည်း သိမြင်ရသည်မှာ စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ပင်ဖြစ်သည်။ လောဘသားများ၏ ယုတ်ညံ့သော အကြံအစည်များကြောင့် သမိုင်းတွင်သော၊ ထင်ရှားသော ရှေးလက်ရာ များပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ကို မြင်ရသည်မှာ စိတ်မကောင်းစရာပင်ဖြစ်သည်။
“ ပုဏ္ဏားမြောင်းကျုံးနဲ့ တံတားဆိုတာရှိတယ်။ မြောက်ဦးနန်းတော်အရှေ့ခြမ်းကို ရန်သူမလာနိုင်အောင်ကာကွယ် ခဲ့တဲ့ကျုံးဖြစ်တယ်။ အဲဒီနေရာမှာ အခုဆိုရင် စစ်တပ်မိသားစုနေအိမ်တွေ ဆောက်နေတဲ့အတွက် အမွေအနှစ်နေရာကို ဖျက်ဆီးသလိုဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီမှာရှိတဲ့ လေသာတောင်ခံတပ်၊ မြတောင်ခံတပ်တွေကိုလည်း ဖျက်ဆီးနေသလိုဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ နန်းတော်ရာကုန်းပေါ်မှာလည်း ရဲတွေက တန်းလျားတိုးချဲ့ နေတာကျတော့မဖြစ်သင့် ဘူးလို့ယူဆတယ်။ အရပ်ဘက်ကဆိုနှင်ထုတ်ခဲ့တာရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာသူတို့ဒီလိုမျိုးတိုးချဲ့လာတာကို ကန့်ကွက်သူ မရှိဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကိုလည်း နည်းဥပဒေထွက်လာမှ အရေးယူဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ သျှစ်သောင်း ပုထိုးတော်အတွင်းမှာလည်း ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပဲ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကို ရောင်းဝယ်နေကြတာကို တွေ့ရတာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ အဲဒါတွေထိန်းဖို့လိုတယ်။ ဒါကတကယ်မဖြစ်သင့်တဲ့ အဖြစ်အပျက် တွေလို့ သုံးသပ်မိပါတယ်” ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သော သမိုင်းသုတေသီ ဆရာကျော်ထွန်းအောင်၏ ဇနီးဖြစ်သူ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဒေါ်ခင်သန်း၏ ပြောစကားများကို ကြားယောင်လာမိသည်။
ဖျက်ဆီးလိုသူများနှင့် ပြုပြင်ဟန်ဆောင်ကြသူများကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ထိန်းသိမ်းဟန်ဆောင်ကြသူများကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ကဲ့သို့ တန်ဖိုးကြီးမားလှသည်မှာ မရှိသတော့ဟုပင် တင်စားထိုက်သော်လည်း ယင်းတို့ကို ဖျက်ဆီးလိုသူတို့၏ နှလုံးသားသည် မွေးရာပါအကြင်အနာတရားမရှိသူ၊ ဖျက်စီးဖို့သတ်သတ် မွေးဖွားလာသူများလားဟုပင် တွေးတောမိပါသည်။
“ ဝေသာလီမှာဆိုရင် ယေဓမ္မာစာတမ်း ထွက်ကျလာတဲ့ကုန်းဟာလည်း လူနေအိမ် အောက်ကိုရောက်ရှိပြီး လုံးဝပျောက်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ခုက ပြတိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ နွားလားဥဿဖ ထွက်ရှိ၊ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ကုန်းဆိုရင်လည်း အခုအချိန်မှာ အရာတောင်မရှိတော့ဘူး။ ဝေသာလီမှာ တူဖော်ထိန်းသိမ်းမှုတွေ မရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းပဲ နည်းဥပဒေထွက်လာမှ ထိန်းသိမ်းလာမယ်လို့ ကျွန်မထင်တယ်။ နောက်ပြီး ဓည၀တီမြို့ဟောင်းပေါ်မှာ ဖောက်ချင်တိုင်း ဖောက်နေတဲ့ ဆည်မြောင်းတာတမံတွေကိုလည်း ဥပဒေထွက်လာမှ တားဆီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်”
ဒေါ်ခင်သန်းပြောကြာချက်များပြန်လည်ကြားယောင်မိတိုင်း မြောက်ဦးသည် လွန်စွာကြည်ကွဲစရာ၊ ၀မ်းနည်းစရားများ နှင့်ပြည့်လျံနေသော ရှေးဟောင်းဇုန်တစ်ခုဖြစ်သည်ကို တွေးမိကာ ဖော်မပြနိုင်သော ဝေဒနာများစွာကို ရင်မှာမျိုသိပ် ခဲ့ရပြန်သည်။ စာရေးသူ ရင်ထဲတွင် မြတ်နိုးတွယ်တာခဲ့သော မြောက်ဦးသည် ယခုအခါတွင် မိဘမဲ့ကလေးငယ် တစ်ဦးသဖွယ် အငတ်ငတ်အပြတ်ပြတ်ဖြင့် နုံချာနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ရခိုင်ကို ကမ္ဘာကသိစေနိုင်သော အချက်မှာမြောက်ဦးဖြစ်သည်။ ယင်းအတွက်မြောက်ဦးသို့ နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များ နှစ်စဉ်လာရောက် လည်ပတ်လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များကို မှတ်တမ်းတင်ကြသည်။ သို့သော် လည်း တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေသော အကြောင်းအရာပေါင်း မြောက်များစွာ ထုတ်ဖော်မပြနိုင်သည်မှာ အားနည်းချက်များစွာပင်ဖြစ်ပေမည်။ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဇုန် တစ်ခုဖြစ်လာရေးနှင့် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဇုန်ဖြစ်လာရေးမှာလည်း အရေးပါလှသော ကိစ္စရပ်များပင်ဖြစ်ပေသည်။ မကြာသေးမီ ကာလအတွင်းက ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဇုန်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေတစ်ရပ်ကို ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ် တော်သို့တင်သွင်းရန် ရေးဆွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။ ယင်းသို့ ရေးဆွဲရာတွင်လည်း ပညာရှင်များဖြစ်သည့် သမိုင်းသုတေသီများ၊ သမိုင်းပညာရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးခဲ့သည်ကိုလည်း သိရသည်။ ဥပဒေနည်းဥပဒေများပေါက် ပေါက်လာပါက မြောက်ဦးသည် တစ်နည်းတစ်ဖုံပြောင်းလဲ လာနိုင်မလားဟုပင် မချင့်မရဲတွေးမိပါသည်။
ရှေးဟောင်းနယ်မြေအတွင်း ရထားလမ်းဖောက်လုပ်သဖြင့် ဒေသခံများက ကန့်ကွက်ခဲ့သည်များကိုလည်း သိရသည်။
ယင်သို့ကတ်ကွက်လိုက်သည့်အတွက်လည်း ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းကို ယာယီရပ်တန့်ထားသည်ဟုဆိုသည်။ ကောင်းအောင်လုပ်သူနှင့် အလုပ်ကောင်းသူများကိုလည်း ခွဲခြားသိနိုင်ပေသည်။ ဖြစ်ချင်သည်ဖြစ် ကိုယ့်နှင့်မဆိုင်ဟု သဘောထားကာ လုပ်ချင်သည်များကို ယခင်ကလည်း လုပ်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ ယခုအခါတွင်လည်း ထပ်မံလုပ်ဆောင် နေကြမည်ဆိုလျင် မြောက်ဦးဇုန်သည် ကွယ်ပျောက်သွားမည့်အနေအထားသို့ ရောက်သွားသည်ဖြစ်သဖြင့် ထိန်းသိမ်းလိုသူများက ကြိုးစားနေကြဆဲဖြစ်သည်ကိုလည်း ကြားသိရသဖြင့် ၀မ်းသာရပြန်သည်။
မြောက်ဦးရှိ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များစွာကို လေ့လာကြည့်ရှုစဉ်ကာလအတွင်း အကောင်းပြောသူနှင့်အပြော ကောင်သူများကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရသည်။ ဘုရားထက်ကြီးသူများကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရသည်။ ဘုရားကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး နောက်ကွယ်တွင် စီးပွားရှာသူများကိုလည်းတွေ့ရသည်။ ထို့အပြင် တစ်ချို့သော စေတီဘုရားပုထိုးများ၌ ဘုရား က ပင် အကြွေးပေးရန်ရှိသည့်အလား ဘုရားထံမှရရန်ကျန်ငွေအဖြစ် ရေးသားထားသော ငွေစာရင်းများကိုလည်း တွေ့ ရပြန်သည်။ လုံးဝမဖြစ်သင့်သော အကြောင်းအရာများစွာသည် ရင်နှင့်မဆန့်အောင် တနင့်တပိုးရရှိခဲ့ပါသည်။
မြောက်ဦးသည် အပြင်သဏ္ဍာန်အားဖြင့် ဖြစ်မြဲတရားဟု တွေ့မြင်နိုင်သော်လည်း မမြင်နိုင်သော ခြိမ်းခြောက်မှုများစွာတို့သည် မြောက်ဦးဇုန်ကို တွန်းအားပေးနေသကဲ့သို့ ခံစားရသည်။ ချောက်နက်ကြီး တစ်ခုထဲသို့ ကျရောက်နေခြင်း မဟုတ်သည့်တိုင် ကယ်တင်ရမည့် အနေအထားများကို မြင်ရသည်။ မြောက်ဦး၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စွက်ပြီး ကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ရမည်။ တစ်စုံတစ်ခုသော အကြောင်းအရာထဲသို့ နစ်မြုပ်နေခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်လိုသည်။ ကယ်ဆယ်ရန်လိုအပ်နေသည်ကို မည်သူမျှ ငြင်းနိုင်မည်မထင်ပေ။
လည်ပတ်ခဲ့သော ဘုရားပုထိုးများသို့ ရောက်ရှိတိုင်း ကြည်နူးခဲ့ရသော်လည်း ဘုရားမှအပြန်တွင် စိတ်မကောင်းခြင်း များစွာတို့သည် ခြေလှမ်းတိုင်း၌ပင် ကပ်ငြိပါလာခဲ့သည်ဟု ထင်မိသည်။ ထင်ရှားကျော်ကြားလှသော ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်နယ်မြေသို့ သုံးရက်ခန့်ရှောက်ရှိလည်ပတ်ခဲ့သော ကာလတို့သည် မမေ့နိုင်သော အချိန်ကာလများပင် ဖြစ်ချေမည်ဟုခံစားမိပါသည်။
နံနက်စောစော မြောက်ဦးမှ အမြန်ယာဉ်ထွက်ခွါသည်။ ချောင်းအကွေ့အကောက်များစွာကို ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်လာသော အမြန်ရေယာဉ်ပေါ်မှ မြောက်ဦးကို ပြန်ကြည့်နေမိသည်။ ကယ်တင်သူကိုမျှော်နေသော မြောက်ဦးသည် မိမိအားလက်ပြနုတ်ဆက်ခြင်းထက် လက်ယပ် ခေါ်နေသကဲ့သို့ ခံစားမိသည်။ ဘေးရန်အပေါင်းမှ ကင်းဝေးရန်လိုအပ်နေသော မြောက်ဦး၊ ကယ်တင်ရန်လိုအပ်နေသော မြောက်ဦးသည် မိမိနှင့် တဖြေးဖြေးဝေးကွာ ကျန်ရစ်ခဲ့သော်လည်း မေးခွန်းပေါင်းများစွာ မေးနေသယောင် ပင်ထင်မြင်နေမိပါတော့သည်။ < Prev
မြို့မိမြို့ဘယဉ်ကျေးမှုနှင့် မိဘပြည်သူ နိုင်ငံရေးထဲ... ဦးသိန်းစိန် အစိုးရတက်ရှိလာပြီးနှောက်ပိုင်းတွင် သူ၏ မိန့်ခွန်းနှင့်အတူ ပေါ်ပေါက်တန်ဖိုးတက်လာသည်မှာက...	Read more	အန္တရာယ်စက်ဝန်းကြားက ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်မ... ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေကို တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးတဲ့သူတွေကတော့ နယ်စပ်မျဉ်းတွေ၊ အသားအရောင်ကွဲပြားမှုတွေ၊...	Read more	ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့ အမည်နာမများ နာမည်များ၏အရေးပါမှုသည် မည့်သည့်အရာနှင့် တိုင်းတာမည်ဟုဆိုလျင် ဖြေဆိုရန်ခဲယဉ်းသည့် အရာဖြစ်သည်။ အမည်နာ...	Read more	လုံခြုံ ငြိမ်းချမ်းဖွံ့ဖြိုးသည့် ခေတ်မီနိုင်ငံတော်... နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ တည့်တံ့ခိုင်မြဲရေးမှာ ထိုနိုင်ငံ၏ နယ်မြေ(ပိုင်နက်) အားလုံးလုံခြံ...	Read more	ယမ်းငွေ့ဝေေ၀၊ လွမ်းငွေ့လည်းဝေေ၀ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လှုပ်အခတ်ဆုံးသတင်းမှာ ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ ပီးချောင်းကြောင်းဒေသ...	Read more	ရခိုင်နယ်စပ်စီးပွားရေး ပြိုလဲခဲ့ပြီလား ၂၀၁၂ အရေးခင်းဖြစ်ပြီးနှောက်ပိုင်းတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ အကျိုးစီးပွားများ ပျက်စီးထိခိုက်မှုထဲ၌ နယ်စပ်က...	Read more	ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှာ ကျောက်မီးသွေးလျှပ်စစ်စက်ရုံ တ... ငယ်ငယ်က ကြည့်ခဲ့ဖူးသော ၂၀ ရာစုခေတ်ဦးကာလ ဇာတ်အိမ်နှောက်ခံနှင့်ရုပ်ရှင်ကားများတွင် ကျောက်မီးသွေး...	Read more	ဦးအေးမောင် ရွေးချယ်ရမည့် လမ်း ပါတီ အစည်းဝေးတွင်း ဦးခိုင်ပြည်စိုးက ဒေါက်တာအေးမောင် အားတရားစွဲဆိုမည်ဟု ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ဦးအေးေ...	Read more	ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားခုခံတော်လှန်... ကျွန်ုပ်တို့ ယနေ့ စစ်တိုက်နေကြသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်ကို လိုလားကြသူများ၊ စစ်ဝါဒီများကား ...	Read more	အမေရိကန် သန်းကြွယ်သူဌေး၏ ရခိုင်ဒေသသို့ ရောက်ရှိမူ ... နှင်းသွန်းအိမ်
ကမ္ဘာစီးပွားရေး စာမျက်နှာတွင် ရေပန်းစားလာသော ရခိုင်ဒေသသို့ အမေရိက သန်းကြွယ်သူဌေးရောက်...	Read more	UN တွင် ဘင်္ဂလီ (ရိုဟင်ဂျာ) အခွင့်အရေးများကိုသာ ထောက... ရမ္မာနွေ
အခုတလော သတင်းစာတွေ၊ တီဗွီအစီအစဉ်တွေ၊ ရေဒီယိုတွေကို နားထောင်ရတိုင်း၊ ဖတ်ကြည့်မိတိုင်း လူ့အခွ...	Read more	ငပလီ မြို့ ဂျိတ္တောကျေးရွာမှ ခိုနားရာမဲ့သူတို့၏ဘဝမျ... မိုးအောင်
ပင်လယ်ပြင်မှ ကမ်းခြေသို့လိုင်းများ ရိုက်ပုတ်နေသည့် လေတိုက်ခတ်မူများကြားတွင် လှေငယ်များနှင...	Read more	ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ ရခိုင်ပြည်က သူဌေးကြီး စိုးစိုး (Akyab) စစ်တွေမြို့အား မြစ်ပြင်ကလှမ်းကြည့်လျှင် အထင်အရှားမြင်တွေ့ရသည် အဆောက်အအုံထဲတွင် ခေ...	Read more	ပေါက်တောမြို့၏ မနက်ဖြန် မြနှင်းသူ
ကျွဲကူးမြစ်ပေါ်တွင် မှေးတင်ပြီး ကိုလိုနီခေတ်က ဖြစ်တည်ခဲ့သော မြို့ဟောင်းတစ်မြို့ကို ကျောခို...	Read more	လူ့အခွင့်ရေးတဲ့လား ပြင်သစ် ဝေဟင်အောင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လက ရခိုင်ပြည်မှာ ဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့ အရေးအခင်းပြီးကတည်းက ဥရောပနိုင်ငံအပါအ၀င်...	Read more	OPINION
ရခိုင်ရိုးတောင်ဟာ ကတုံးဖြစ်သွားပြီလား	မိုးဇော်မြင့် Opinion	June 07 2015	လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်ဝန်ကျင်လောက်က မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ နေရာတွေ၊ မြင်ကွင်းတွေဟာ ဒီကနေ့ မြင်တွေ့နေရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ အရမ်းကို ကွာခြားသွားပြီး နေရာအသစ်တခုရောက်သွာ...	Read More Feature
နယ်ချဲ့တို့၏ စစ်အေးလက်နက် (သို့) ခိုးမှု၊ လုယက်မှု၊ လူသတ်မှု၊ မုဒိန်းမှုနှင့် လောဘသားကောင်တို့၏ တရားခံ	ပုတု (ကညာပျို) Feature	May 23 2015	နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများ၊ စာစောင်များ၊ ဂျာနယ်များတွင် အများဆုံး ဖတ်ရှုရ၊ တွေ့မြင်ရသော အကြောင်းအရာမှာကား မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုပင် ဖြစ်သည်ကိုတေ...	Read More Life
နောက်ဆုံးသစ်ရွက်	ကျောက်ရစ်ကေ (ပုစွန်ဖယ်) Life	May 28 2015	ဖတ်မိထားသည့် ၀တ္တုတိုကလေး တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်စာရေးဆရာ အိုဟင်နရီ (O.Henry) ၏ The Last Leaf နောက်ဆုံးသစ်ရွက်ဖြစ်ပါသည်။ ထို ၀တ္တုထဲမှ အမျိုးသမီးငယ်နှ...	Read More Satire
ကုမ္ပဏီနိုင်ငံရေးနဲ့ တင်ဒါပါတီ	မိုးဇော် Satire	January 21 2015	မစ္စတာဝေ `ကျွန်တော်ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ၂၀၁၀ မှာမွေးဖွားသန့်စင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ကို ၈၈ မှာသတည်တည်ပြီး ၉၀ မှာတကြိမ် မွေးဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် လူမ...	Read More Business
ဘင်္ဂလာနိုင်ငံတော်ဝင်ငွေ မြန်မာ့ပို့ကုန်မှ တာကာ ၅၆၈၁၃၃၄၉ ရရှိဆို သဇင်ဥ Business	November 25 2014	မြန်မာ့တင်ပို့ကုန်မှ ဘင်္ဂလာနိုင်ငံတော်ဝင်ငွေ တာကာ (၅၆၈၁၃၃၄၉) ကော့စ်ဘဇားခရိုင် တာခ်နာဆိပ်ကမ်းမှ စက်တင်္ဘာလအတွင်း အကောက်အခွန် ရရှိခဲ့ကြောင်း ဆိပ်ကမ်းတာဝန်ရ...	Read More Book Review
စာပေလေ့လာမှု အယူအဆများ (နိုင်ငံရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ သမိုင်းနှင့်စာပေ)	ဝေမိုး Book Reivew	March 01 2015	စာပေလေ့လာမှု အယူအဆများ (နိုင်ငံရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ သမိုင်းနှင့်စာပေ) မင်းခက်ရဲ စာရေးဆရာ မင်းခက်ရဲ ရေးသားထားသည့် Myanmar Knowledge Society စာအုပ်တိုက်ထုတ်...	Read More Development News Journal (Development Media Group)	ARAKAN TV PROGRAMME	Arakan Radio Programme	ရခိုင်ဘာသာ အသံလွှင့်အစီအစဉ် လွတ်လပ်တဲ့အာရှ အသံ (RFA) မှ တိုင်းရင်းဘာသာအစီအစဉ်များကို ထုတ်လွှင့်နေရာမှာ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ရခိုင်ဘာသာဖြင့် အသံလွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
တရားခံပြေးလွတ်မြောက်မူတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် စတ္တုတအဆင့်တွင်ရှိ	မိုးဇော် Crime	February 03 2015	တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းတာအရ တရားခံပြေးလွတ်မြောက်မှု အဆင့်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်သည် စတုတ္တအဆင်တွင်ရှိကြောင်း ဇွန်ဝါရီလ ၂၀ ရက်ကနေ့က ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကျော်ဇံမြင့်၏ ပြောကြားချက်များကို နိုင်းယှဉ်ချက်အရသိရသည်။ ဇွန်နဝါရီ ၂၀ ရက်က ကျင်းပသည့် ပြည့်သူလွတ်တော်(၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းဝေးတွင် ပြည်သူလွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်၏ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသည့် တရားခံပြေးစာရင်းနှင့် တရားခံပြေးများကို ဖမ်းဆီးရမိရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း မေးမြန်းမှုအပေါ်...	Read More Election
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ကို ANP မှ ဦးဆောင်ဖွဲ့နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေဟုဆို	မင်းဘာကြီး Election	March 04 2015	လာမည့် ၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မဲဆန္ဒနယ်အားလုံး၌ အနိုင်ရရှိရေးကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ကို ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) မှ ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးထွန်းအောင်ကျော်က ပြောသည်။ လက်ရှိ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပါတီကိုယ်စားပြု ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၂၀၀ ကျော်ရှိပြီး လာမည့် ၁၅ ရက်နေ့တွင်စတင်စိစစ်ပြီး ဧပြီလ...	Read More Copyright © 2017 Development Media Group. All Rights Reserved. Contact Us